‘विकास र आर्थिक समृद्धि ल्याउनेछु’ - silichung.com
‘विकास र आर्थिक समृद्धि ल्याउनेछु’
२ आश्विन २०७५, मंगलवार ०९:३४
भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कैलाशकुमार आलेको जन्म वि.सं. २०३६ सालमा मध्यम खालको पारिवारिक पृष्ठभुमीमा भएको थियो । सानैदेख इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ छवि बोकेका आले वि.सं. २०५१ सालमा विद्योदय मावि पढ्दा नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठनमा अध्यक्ष भएदेखि राजनीतिमा पुर्ण रुपमा होमिएका हुन् । उनी भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसमा वि.सं. २०५७ सालमा स्ववियु सभापति भएका थिए । लामो समयदखि राजनीतिमा सक्रिय उनी वि.सं. २०७० सालमा तरुण दलको अध्यक्ष भएर नेतृत्व गरे । १२ औ महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा जिल्ला कार्यसमितिको कार्यबाहक सभापति भए । हाल १३ औ महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा जिल्ला कार्यसमितिको सचिव समेत हुन् । उनै नवनिर्वाचित मेयरसंग गरिएको कुराकानीको अंश यहा प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. तपाई भोजपुर नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको छ । कुन कुन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सडक खानेपानी लगायतका विकासका महत्वपुर्ण पुर्वाधारहरुको विकास मेरा प्राथमिकतामा छन् । यो नगरपालिका जिल्ला सदरमुकाम पर्ने भएपनि विकास र समृद्धिमा निक्कै पछाडि छ । हुन त सरकारमा पटक पटक जिल्लाले नेतृत्व पाएपनि अपेक्षाअनुसार विकास हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले के नै पो गर्न सक्छ भन्ने पनि होला तर स्थानीय तहमा प्रतिनिधि नभएरै केन्द्रमा नेतृत्व भएपनि विकास हुन पाएन । अब नगरबासीहरु प्रतिनिधिले पुर्ण भएको अवस्था हो । मैले चुनावी प्रचारमा बोलेका, कबुल गरेका र घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्नेछु । किनकी मलाई नेतृत्वमा आउन जनताले जसरी अमुल्य भोट दिनुभएको छ । मैले पदको कुनै हालतमा दुरुपयोग गर्ने छैन । २००७ सालका क्रान्ति योद्धा रामप्रसाद राईको पालादेखि विकासमा भौतारहेको जनतालाई मेरो क्षमताले भ्याएसम्म भरपुर विकास गर्नेछु । मैले विकास गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि जसरी अध्यारोमा हिड्न उज्यालोको साहारा आवश्यक छ । त्यसरी नै गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नेछु ।
२. यसलाई कस्तो नगर बनाउने योजना छ ?
मेरो नेतृवको अवधि ५ बर्षको हुन्छ । यसबीचमा पुर्वी पहाडको कर्णालीका रुपमा जसरी चिनिएको छ । अब चाडै पुर्वी पहाडको सुविधा सम्पन्न नमुना र सुन्दर सहर बनाउने परिकल्पना गरेको छु । यो नगर प्राकृतिक सौदर्यता, धार्मिक, पर्यटकीय, सामाजिक, साँस्कृतिक विविधता बोकेको क्षेत्र हो । नगरका प्रत्येक बस्तीमा व्यवस्थित सडक, एक घर एक धारा, एक घर एक विजुली, टोलटोलमा इन्टरनेट, फाइबर, व्यवस्थित चक्रपथ हुनेछ । कक्षा १२ सम्म एकपैसा फि नलाग्ने गरी शैक्षिक पहुँचमा जनतालाई पु¥याउनेछु । पर्यटनको प्रवद्र्धन स्थानीय स्तरमा अर्थोपार्जनको व्यवस्था गर्नेछु । युवाहरुलाई यही बसेर स्वरोजगार बन्ने अवसरहरु दिलाउनेछु । जम्मा १२ वडा छन्, प्रत्येक वडामा बेड र स्वास्थ्यकर्मी सहितको स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्था हुनेछन् । महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अशक्त, असहाय, बालबालिकालाई बिशेष अधिकार सहितको व्यवस्था हुनेछ । झण्डै दुईदशक पछि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि पाएको अवस्थामा बर्षँैदेखि अधुरा, अपुरा विकासे गतिविधिहरु पुरा गर्नेछु । नगरभित्र विभिन्न आस्था, धार, पृष्ठभुमीका समुदाय छौ, विकास र निर्माणमा जनतलाई कुनै कसर बाँकी नराखी अभावको अनुभव हुन दिने छैन । मैले गरेका बाँचाहरु पुरा गरेरै छाड्नेछु । सबैलाई समान व्यवहार गर्नेछु । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुन दिने छैन । र मेरो नैतिकता पनि होइन ।
३. प्राथमिकतामा पार्नुभएका योजना पुरा गर्न थुप्रै चुनौती छन् नि π
हामी विकासमा पछाडी परेपनि स्थानीय तहमा थुप्रै साधन स्रोत छन् । प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी छौ । तीनको परिचालन गर्नेछु । खाली दृष्टिकोणलाई सकरात्मक बनाउनुपर्ने रहेछ । असम्भव भन्ने केही रहेनछ । राज्यले दिने बजेट त छदैछ । आन्तरीक राजस्व पनि हुने नै छ । तर यसैमा भर पर्ने छैन । धुर्मुस सुन्तलीले जसरी आफैबाट कामको सुरुवात र पुरा गर्नेछु । उनीहरु दुई कलाकारले राज्यको सहयोग विना नमुना काम गरेर देखाएजस्तै मैले पनि स्वार्थ रहित आफ्सेआफ स्रोतसाधन जुटाएर मैले कल्पना गरेको जनताले चाहेको सपनालाई साकार गर्नेछु ।
आत्तिएर निराश भइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन, देशको चिन्ता गर्ने पार्टी सरकारमा छः सांसद राजेन्द्र राई
भोजपुर सदरमुकाममा खानेपानी संकट टार्न करिव ५० करोडको खानेपानी शिलान्यस
‘लाहुरेनी फूल’ उपन्यास लाहुरे सँस्कृतिभित्रको कथा, व्यथा र बास्तविक मनोविज्ञान
प्रदेश १ काे वार्षिक बजेट भरिमा ५८.१५ प्रतिशत प्रगति